၂၀၀၈ နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့က စပြီး အသက်ဝင်လာခဲ့တဲ့ သက်ဝေရဲ့ဘလော့လေးကို ကြည်နူးစိတ် အပြည့်နဲ့ကြည့်နေမိတယ်။ http://www.thet-wai-blog.blogspot.com/ ဆိုတဲ့ link ကလေး ကနေ တဆင့် သွားလိုက်ရင် ရောက်သွားတဲ့ သက်ဝေရဲ့ ဘလော့ ကလေး . . .။ ကိုယ်နိုင်နင်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ အပိုင်းမဟုတ်ပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် အချိန်ပေး ကြိုးစားပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ သက်ဝေရဲ့ဘလော့ကလေး . . .။ အခုတော့ ဒါဟာ သက်ဝေရဲ့ဘလော့ကလေး ပါ လာလည်ကြပါနော် လို့ ဖိတ်ခေါ်လို့ ရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့။
စီဘောက်ကလေးလဲ သူငယ်ချင်း အသစ်ကလေးတွေရဲ့ချစ်စဖွယ် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးတွေ နဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ဖြစ်လာတယ်လေ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အတွေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူး မဆုံးဖြစ်နေရင်းက သက်ဝေ ဘာကြောင့် ဘလော့ရေးဖြစ်တာလဲ လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်မိတယ်။
တကယ်တော့ သက်ဝေရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်က ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုတွေကို တိတ်တဆိတ် လျှို့ ဝှက်တတ်သူ. . . တစ်ယောက်ထဲ ငြိမ်သက်စွာ တွေးတောတတ်သူ . . . ဘာဘဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဖွင့်ဟပြောဖို့ ရာ အလွန် ဝန်လေးတတ်သူ . . . ဒါပေမယ့် အခုတော့ဖြင့် ဘာကြောင့် ဒီဘလော့ ကလေးကို ဖန်တီးမိပါလိမ့် လို့သက်ဝေ တွေးကြည့်နေမိတာ . . .။
ဘာကြောင့်များပါလိမ့် . . .။
ပြောရရင်တော့ ဟိုး ခပ်ငယ်ငယ် ကထဲက သက်ဝေမှာ ဒိုင်ယာရီရေးတဲ့ အကျင့် ရှိတယ်။
စရေးဖြစ် တာကတော့ ၄ ၅ တန်း အရွယ်လောက် ကထဲကပေါ့။
အဲဒီတုန်းကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် တစ်နေ့ တစ်နေ့ကျက်စရာရှိတဲ့ စာတွေ လုပ်စရာရှိတဲ့ အိမ်စာတွေ ကို နေ့ စဉ်နေ့ စဉ် ချရေးတတ်ရာက စခဲ့တယ်။ (အမှန်ကတော့ ခေါင်းကိုအားမကိုးတတ်တာလို့ မေမေ ကပြောခဲ့တယ်။)
အဲဒီ့နောက် ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဒိုင်ယာရီဆိုတာကို သေသေချာချာ ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရေးပုံရေးနည်း တွေကတော့ အမျိုးမျိုးပေါ့။
အားရင်အားသလို စီကာပတ်ကုံး ရေးတတ်သလို အချိန်မရတဲ့ အခါမျိုးကျရင်တော့ စာမေးပွဲ အတွက် မှတ်စုထုတ်သလို လိုရင်းတိုရှင်းလေး ရေးတတ်တယ်။ အဲ . . ချစ်သူရှိလာတဲ့ အချိန်ကျတော့ တစ်မျိုးပြောင်းသွားပြန်တယ်။
သူ့ အကြောင်းတွေကို နေ့ စဉ် မမောနိုင် မပန်းနိုင် အသေးစိတ် ရေးဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။
အဲဒါတွေအပြင် တစ်ခါတစ်ခါ ကျရင်တော့ ကိုယ့်တစ်ယောက်သာ နားလည်နိုင်တဲ့ လျှို့ ဝှက်စကား ဆန်ဆန် အတိုကောက်တွေလဲ ရေးတတ်သေးတယ်ပေါ့။ (မတော်တဆ အိမ်က အိမ်သား တစ်ယောက်ယောက်တွေ့ သွားခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးကြောင့် . . .)
ဒါပေမယ့် အခုတော့ အသက်အရွယ် နဲ့အချိန်အခါ အခြေအနေတွေ အရ ဘ၀မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေကို မိသားစုအတွက် မဖြစ်မနေ ခွဲဝေပေးနေရပြီ။ ဒီတော့ ကိုယ့်အတွက် အချိန်တွေ အရမ်းရှားပါးခဲ့ရပြီဆိုပါတော့။ ဒိုင်ယာရီလဲ မှန်မှန်မရေးဖြစ်ခဲ့တာ ကြာလှပေါ့။ မမှတ်မဖြစ် စာရင်းအင်းအချို့ ရယ် အရေးတကြီးလုပ်စရာ အချို့ ရယ်ကလွဲလို့ဘာဆိုဘာမှ မရေးဖြစ်တော့တာ . . .
ဒါပေမယ့် သီချင်းတွေ ကို အမြဲမပြတ် နားထောင်ပြီး စာတွေကိုလည်း အချိန်ရရင် ရသလို တော်တော်များများ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
စာတွေဖတ်တိုင်း စာရေးချင်တဲ့စိတ်တွေ ခဏခဏ ဖြစ်လာတယ်။ အချိန်တော်တော်များများမှာ စိတ်ထဲမှာ ချရေးချင်တဲ့ စကားလုံးတွေ အများကြီး ရှိရှိနေတတ်တာ . . .။ စိတ်ကသာရှိ ပြီး လူကမလိုက်နိုင်တော့ အတွေးစိတ်ကူးတွေ ဆုံးရှုံးရပေါင်းလည်းများလှပေါ့။
အဲဒါနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်ကစပြီး အချိန်ရှိသ၍ မြန်မာဘလော့တွေထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာဖတ်ရှု လိုက်ရာကစလို့စာရေးချင်တဲ့စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာတော့တာပါဘဲ။ ဒါကြောင့်လဲ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နဂိုကတည်းက ရှိရင်းစွဲ ၀ါသနာကလေး ကိုအခြေခံရင်း သက်ဝေ ဘလော့စရေးဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာ ဒါဟာ သက်ဝေရဲ့ နေ့ စဉ်မှတ်တမ်း မဟုတ်ရင်တောင် လစဉ်မှတ်တမ်း လေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရုံးအလုပ်တစ်ဖက် အိမ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့အားလပ်ချိန်နဲပါးရတဲ့ ကြားကနေ မရမက မကြိုးစားစဖူး ထူးထူးခြားခြား အားထုတ်ကြိုးစားရင်း ဒီဘလော့လေး ရခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုကတော့ သက်ဝေရဲ့ ဘလော့ ထဲမှာ ဗဟုသုတဖြစ်စရာ မှတ်လောက်သားလောက်စရာတွေ ဘာမှရှိမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သက်ဝေ စိတ်ထဲမှာရှိသမျှ ရေးလိုရာကိုရေးထားတဲ့ အတွက် ဖတ်ရတာ သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်လို့ မထင်လို့လာလည်ပြီး စာတွေလာဖတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးလည်းတင် အားနာလို့ လဲမဆုံးပါ. . .။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ စာစု အသစ်အသစ် တွေကို ကြိုးစားပြီး ဖန်တီးသွားအုံးမှာပါ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သက်ဝေရဲ့ ဘလော့ ကလေး ဖြစ်လာဖို့. . . .
- သက်ဝေ ကို ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေးတစ်ခု လုပ်ဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့
ချစ်စရာ ညီမလေး တစ်ယောက်။
- သက်ဝေ ရဲ့ဘလော့လေး လူလူသူသူဖြစ်လာအောင် နေ့ စဉ် နေ့ တိုင်း ၀င်ရောက် လေ့လာခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ကာ ညီအစ်ကို မောင်နှမတစ်စုရဲ့ ဘလော့ကောင်းကောင်းလေးတွေ။
- သက်ဝေ ရဲ့ ဘလော့လေး ကို ပထမဆုံး လာရောက်အားပေးကြတဲ့ မောင်မျိုး နဲ့သားဖြိုး အပါအ၀င် သူငယ်ချင်းလေးများအားလုံးနဲ့ ကျေးဇူးတင်ထိုက် သူများအားလုံးကို ဒီနေရာကနေ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေ။
သက်ဝေ ရဲ့ ဘလော့လေး မှာ အမြင်မတော်တာ မှားယွင်းနေတာ လိုအပ်နေတာများ ရှိခဲ့ရင်လည်း ချက်ချင်း ထောက်ပြ ဝေဖန်ကြဖို့ လေးလေးစားစား ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။ လာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by သက်ဝေ at 1:33 PM
Winkabar January 9, 2008 at 8:28 PM
ကိုသက်ဝေရေ နောက်ဆက်လှမ်းရမယ့်ခရီးလမ်းလည်းဒီထက်ပိုပြီးဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါစေနော်။ ဘလော့ရေးရင်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
မျှော်လင့်ခြင်း (ပုလဲသီ တစ်ကွဲစီ)
မောင်မျိုး မွေးနေ့ အမှတ်တရ
စားကြပါအုံးနော် . . ။
ရယ်မောခြင်း သည် အသက်ရှည်၏
နှစ် ၆၀ ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ 